ज्योतिष शास्त्रः बिहीबारको दिन के गर्दा मिल्छ शुभफल ? « Nepal's number 1 Entertainment news portal
Published :6August, 2020 10:04 am
बिहीबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने विश्वास गरिन्छ । तर बिहीबार केही काम गर्न भने निषेध गरिएको छ ।१. कपाल नुहाउनु हूँदैन, २. रौं काट्नु हुँदैन, ३. दारी काट्ने वा नङ काट्ने, ४. भारी कपडा धुनु र फोहोर गर्नु हुँदैन, ५. लक्ष्मीको मात्र पुजा पनि गर्नु राम्रो मानिदैन । शास्त्रमा बिहीबार कपाल नुहाउन नहुने उल्लेख छ । खासगरी महिलाहरुले बिहीबार कपाल नुहाउनु अशुभ मानिन्छ ।
महिलाको जन्मकुण्डलीमा वृहस्पति पतिकोरुपमा रहने हुँदा यो दिन कपाल नुहाउनु नराम्रो मानिन्छ । बिहीबार कपाल नुहाउँदा पति र सन्तानलाई अशुभ हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । बिहीबारको दिन कपाल वा दारी काट्नु अशुभ मानिएको छ । वृहस्पतिलाई जीवन अर्थात जीवन भनिएको छ । बिहीबार रौं काट्दा गुरु ग्रह कमजोर हुने भनिन्छ । यसो गर्दा शिरमा असर गर्ने र उमेर समेत कम हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
भगवान पशुपतिनाथको दर्सन गरि आजको राशिफल पद्नुहोस !
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ,,,,, लाभहानी, आयव्यय, सुखदुःख बराबरी खालको
धार्मिक ग्रन्थहरुमा शनिबारलाई विशेष दिनको रुपमा मान्ने गरिएको छ । ब्रहमान्डलाई नौ ग्रहहरुको रूपमा वर्णित
सुपा देउरालीको दर्सन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै
भगवान श्री पशुपतिनाथ को दर्सन गरि तपाइको आजको राशिफल हेर्नुहोस